သို့သော် sarcoidosis သငျသညျထိခိုက်သည် SarcoidosisUK သငျသညျကိုထောကျပံ့ဖို့ဘာပဲကျနော်တို့တတ်နိုင်သမျှလုပ်နေဖို့သန္နိဋ္ဌာန်ချထားပါတယ်။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောထောက်ခံမှုန်ဆောင်မှုများကျွန်တော်တို့ရဲ့အကွာအဝေးအကြောင်းကိုပိုမိုထွက်ရှာပါ။
SarcoidosisUK ရဲ့ပံ့ပိုးမှု Hub မှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်။
SarcoidosisUK sarcoidosis လူနာမကြာခဏသူတို့လိုအပ်သို့မဟုတ်ထိုက်ထောက်ခံမှုမရကြဘူးကြောင်းကိုငါသိ၏။ ငါတို့သည်သင်တို့စကားကိုနားထောငျနှင့် sarcoidosis ကြောင့်ထိခိုက်မည်သူမဆိုကိုထောကျပံ့ကူညီပေးဖို့န်ဆောင်မှုတစ်ခုအကွာအဝေးထောက်ပံ့ပေးခဲ့ကြသည်။
ကျနော်တို့ကိုသူတို့တစ်ဦးချင်းစီကတခြားကိုထောကျပံ့ကူညီနိုင်အောင်အတူတကွလူနာချိတ်ဆက်ဖို့ရည်ရွယ်ထားပါသည်။ သည့်အခါလိုအပ်သောကျနော်တို့ကိုလည်းအပိုဆောင်းဆေးဘက်ဆိုင်ရာပံ့ပိုးမှုပေး။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက် sarcoidosis ကြောင့်ထိခိုက်မည်သူမဆိုသူတို့ကိုဂရုစိုကျနှင့်နားလည်သောသူတစ်စုံတစ်ဦးကိုမှစကားမပွောနိုငျကြောင်းသေချာစေရန်ဖြစ်ပါသည်။
The SarcoidosisUK Nurse Helpline was established in 2016 and has spoken to over 700 callers; people affected by sarcoidosis in many different ways. Calls are made by part-time NHS nurses who have personal experience of sarcoidosis. They are experts who provide an empathetic, listening ear. ယခုဖုန်းခေါ်အချိန်စာရင်း.
အဆိုပါ SarcoidosisUK ပံ့ပိုးမှုအဖွဲ့များကွန်ယက်ကို Plymouth ကနေပါ့ရန်, ဗြိတိန်အထိချဲ့ကာ။ ကျွန်ုပ်တို့၏အုပ်စုများကယ့်ကိုဖော်ရွေကြပြီးသူမည်သူမဆိုဖိတ်ခေါ်ခဲ့သည်ရဲ့! သူတို့ကအသိုင်းအဝိုင်းစင်တာများ, ဘုရားကျောင်းခန်းမများနှင့်ဆေးရုံများအတွက်တိုင်း 4-6 ပတ်ကြာခရီးဦးကြိုပြုခြင်းနှင့် sarcoidosis နှင့်အတူအံ့သြဖွယ် volunteers များ run သောနေကြသည်။ သင့်ဒေသခံအုပ်စုတစုကိုရှာပါသို့မဟုတ်သင့်ကိုယ်ပိုင်စတင်ရန်.
ကျွန်ုပ်တို့၏အွန်လိုင်းဖိုရမ်အွန်လိုင်း sarcoidosis နှင့်အတူအခြားသူများထံမှထောက်ခံမှုရှာပြီးပြည့်စုံသောအရပ်ဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါ SarcoidosisUK Facebook ကအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့မဆို sarcoidosis-related ခေါင်းစဉ်နှင့် ပတ်သက်. ယေဘုယျဆွေးနွေးမှုများအတွက်စုံလင်သည်။ ပုဂ္ဂလိက SarcoidosisUK ဖိုရမ်ကွာလူမှုရေးမီဒီယာကနေဆွေးနွေးများအတွက်လျှို့ဝှက်အာကာသဖြစ်ပါတယ်။ ယခု join ။
ကျနော်တို့ SarcoidosisUK ပေးသည့်အံ့သြဖွယ်ထောက်ခံမှုအလွန်ဂုဏ်ယူကြသည်။ သို့သော်ထိုသို့အဘယ်သူအားမျှလှူဒါန်းခြင်းမရှိဘဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သင်တို့သည်ငါတို့၏ထောက်ခံမှုန်ဆောင်မှုကနေအကျိုးကြလျှင်, ယနေ့လှူဒါန်းခဲ့စဉ်းစားပါ ကျေးဇူးပြု..
ဤသည် sarcoidosis ၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအတွေ့အကြုံနှင့်အတူ NHS သူနာပြုများအားဖြင့် run နေတဲ့လျှို့ဝှက်တယ်လီဖုန်းဝန်ဆောင်မှုဖြစ်ပါတယ်။ သင်သည်မည်သည့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာမေးမြန်းချက်မှတဆင့်စကားပြောနိုင်ပါတယ်။ ဤသည် sarcoidosis သတင်းအချက်အလက်နှင့်အာမခံကြောင့်ထိခိုက်မည်သူမဆိုပေးသင့်ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အုပ်စုများကယ့်ကိုဖော်ရွေများမှာ - sarcoidosis ကြောင့်ထိခိုက်မည်သူမဆိုကြိုဆိုသည်။ ဒါဟာသင်အမှန်တကယ် sarcoidosis သင့်ရဲ့အတွေ့အကြုံများကိုဝေမျှနှင့်အခြားသူများထံမှလေ့လာသင်ယူရန်, နားလည်သူတွေကိုအားဖြင့်စကားကိုနားထောငျရနျအတှကျအခှငျ့အလမျးဖြစ်ပါတယ်။
SarcoidosisUK ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Facebook မှာ Group နှင့်လျှို့ဝှက်အွန်လိုင်းဖိုရမ်အပေါ်တက်ကြွစွာအွန်လိုင်းထောက်ခံမှုအသိုင်းအဝိုင်းရှိသည်။ ဤမေးခွန်းများကိုမမေးနှင့်အခြားလူရဲ့အတွေ့အကြုံများကိုအကြောင်းပိုမိုထွက်ရှာတွေ့မှကြီးမြတ်သောနေရာများဖြစ်ကြသည်။